July 2017 – Arakan Times
Breaking News: Three concealed Rohingya by Rakhine extremists found dead
July 31, 2017	Leaveacomment 1,367 Views
July 31, 2017 AT Correspondent, Rtd Three Rohingya who were hidden by Rakhine extremists on 29 July have been found dead by Rohingya residents floating under the Bridge of ShwetPyin River today, 31 July 2017. Source said to our correspondent, on 27 July 2017,aRakhine man along with two Thet ethnic people went to the forest creek beside their ...
AT Burmeseမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်နေသူမှာ BGPလား ရခိုင်လား
July 31, 2017	Leaveacomment 1,812 Views
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ နီလန်ဘော့ကျေးgရွာမှ ရိုဟင်ဂျာလေးဦးကို ဇူလိုင် ၂၉ရက်နေ့နဲ့ ဇူလိုင် ၃၀ရက်နေ့များတွင် နယ်ခြားစောင့်ရဲများ ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာမှ အစအနပျောက်နေကြောင်း ဦးမောင်ကျော် က ပြောခဲ့တယ်။ အီမာန်ဟူစိန်က သူ့သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူ လယ်ကွင်းထဲတွင် ဇူလိုင် ၂၉ရက်နေ့ ည၁၀နာရီအထိ ရှိခဲ့ တယ်။ ၁၀နာရီနောက်ပိုင်း အချိန်အတန်ကြာ အိမ်ပြန်မလာတဲ့အတွက် စုံစမ်းခဲ့ရာမှ “သူတို့ကို နယ်ခြားစောင့်ရဲ တွေက ခေါ်သွားတယ်”လို့ ရခိုင်သားတစ်ဦးက ပြောခဲ့တယ်။ နီလန်ဘောကျေးရွာနေ အီမာန်ဟူစိန်က ကိုယ်ပိုင် လယ်မြေမရှိတဲ့အတွက် ရခိုင်သား ဦးလှထွန်းဖြူရဲ့ လယ်မြေကို ငှားယူပြီး ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနေတာ ၄-၅နှစ်ရှိ နေပြီ၊ ၂၉ရက်နေ့က အီမာန်ဟူစိန်နဲ့အတူ သားဖြစ်သူ နူရ်ဟာကီမ် (၁၇နှစ်)နဲ့ နူရ်အာလင် (၁၅နှစ်)တို့ အတူရှိခဲ့ တယ်။ ၁၀နာရီကျော်အထိ မလာလို့ ဖုန်းဆက်တော့ ဖုန်းပိတ်ထားတယ်။ လယ်မြေရှိရာသို့ သွားကြည့်တော့ သူတို့ကို မတွေ့ခဲ့ပါ။ ...
Four Rohingya hidden, two being tortured in Northern Rathedaung
July 30, 2017	Leaveacomment 2,079 Views
July 30, 2017 AT Correspondent, Rtd BGP border guards police had taken Iman Husein and his two sons from their farmland which was hired fromaRakhine, Hla Tun Phyu at 11PM on July 29, 2017. As they hiredaRakhine’s farmland to cultivate,aRakhine witnessed BGP taking them but in the morning when their family members were looking ...
Myanmar BGP extort huge money from poor Rohingya residents in Northern Maungdaw
July 30, 2017	Leaveacomment 623 Views
July 30, 2017 AT Correspondent, Taung Pyo About 50 Border Guard Police forces from Kyin Chaung and ZebinChaung based camps entered the Sin U village tract of KyaungPaukSin U union of TaungPyo hamlet and raided every houses of the village on 28 July 2017 at around 2: 00 pm. However, they did not find any illegal things inside the houses ...
AT Burmese အစိုးရအလိုတော်ရိများ၏မမှန်သတင်းကိုယုံကြည်၍ BGPများကရိုဟင်ဂျာများ၏နေအိမ်ဖျက်ဆီးခြင်း။
July 30, 2017	Leaveacomment 803 Views
၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ နေ့ နေ့လယ် ၂နာရီချိန်တွင် တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့၊ ကျွန်းပေါက်ဆင်အိုး ကျေးရွာအုပ်စု ဆင်အိုးရွာသို့ ကြိမ်ချောင်းနှင့် ဇီးပင်ချောင်းအခြေစိုက်BGPအင်အား ၅၀ဦးရောက်ရှိလာပြီး ကျွန်းပေါက်ဆင်အိုးကို ဝိုင်းရံထားကာ နေအိမ်များအတွင်းဝင်ရောက်လျက်နေရာအနှံ့မွှေနှောက်ရှာဖွေခဲ့သော်လည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။သို့ရာတွင် ထိုBGP များသည် ရိုဟင်ဂျာများသည်နေအိမ်ခြံဝင်းတွင်အကာအရံထားရှိသည်ဟူ၍၄င်း၊ ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာများတွင် ပလတ်စတစ်အကာအရံများထားရှိသည်ဟူ၍၄င်း၊အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာကြံကာ လက်နက်အားကိုးလျက်အောက်ပါအတိုင်းငွေညှစ်ခဲ့ပါသည်။ ငွေညှစ်ခံရသူများမှာ ၁။ နုရ်မာမတ် ဘ ဆော်ယောတ် ညှစ်ခံရငွေ ၈သောင်းကျပ်အပြင် လှီးပြီးသား ကြက် ၂ကောင် လုယူသွား ၂။ ဆော်ယောတ်ဆလာမ် ဘ ရှူက္ကုရ် ညှစ်ခံရငွေ ၅သောင်းကျပ် ၃။ မာမတ်ကာဆိမ်း ဘ ကာလာမျာ ညှစ်ခံရငွေ ၅သောင်းကျပ် ၄။ နုရ်လာမိန် ဘ ဆာဘဲရ် မှ ၃၅၀၀၀ကျပ် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် အမည်ကွဲလွဲနေသည်ဆိုပြီငွေညှစ် ၅။ ရှောမ်ရှူ ဘ ဘော်ရှိရာမာန် မှ ၁၅၀၀၀ကျပ် ...
Rakhine with the help of BGP in an attempt to attack Rohingya over false allegation in Rathedaung
July 29, 2017	Leaveacomment 672 Views
July 29, 2017 AT Correspondent, Rtd Ultra-nationalist Rakhine monks including extremists in cooperation of Myanmar Border Guard Police (BGP) are in an attempt to attack innocent Rohingya residents overaconcocted allegation of killingaRakhine man in ShwetPyin village tract of Southern Rathedaung. According to our correspondent report, the ShwetPyin Rakhine village tract where Rakhine, Thet and Kami ethnic ...
AT Burmese ရသေ့တောင်မှရိုဟင်ဂျာများအပေါ်လီဆယ်၍အကြမ်းဖက်ရန် ၉၆၉ဂိုဏ်းဝင်ဘုန်းကြီးနှင့် BGPများကြိုးပမ်း။
July 29, 2017	Leaveacomment 567 Views
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရသေ့တောင်မြို့နယ်အပိုင် ချွတ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စုသည် ရခိုင်၊သက်၊ခမီး လူမျိုးများနေထိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဖြစ်၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများနေထိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုများနှင့်ထိစပ်လျက်တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၇နေ့တွင် ရခိုင်လူမျိုး တစ်ဦးနှင့်သက်လူမျိုးနှစ်ဦးတို့ပူးပေါင်းကာတောတောင်သို့ ခရုသွားရှာရန်ထွက်သွားခဲ့ပြီး အပြန်တွင် သက်လူမျိုးနှစ်ဦးသာပြန်လာခဲ့သော်လည်းအတူသွားခဲ့သူရခိုင်လူမျိုးကမူအိမ်ပြန်လာခဲ့ခြင်းမရှိဘဲပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု ၉၆၉ဂိုဏ်းဝင်ဘုန်းကြီး၊ရခိုင်ရွာခံများနှင့်BGPများ၏ပြောပြစွပ်စွဲမှုအရသိရပါသည်။ အမှုအခြင်းအရာသဘောအရကြည့်လျှင် အတူတူသွားခဲ့သူတစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေမှုသည်မူလကအတူရှိခဲ့သူနှစ်ဦးမှာသာအဓိကတာဝန်ရှိရပေမည်။သို့ရာတွင် ယခုအခါ ဘုန်းကြီးများ၊ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်BGPများကညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ထိုဖြစ်စဉ်၏တရားခံအဖြစ်ရိုဟင်ဂျာများအားပုံဖော်လျက်နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့လီဆယ်တိုင်တန်းရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေသည်ဟုသိရပေသည်။ အလားတူဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၇နေ့တွင် မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း တောင်ပြိုလက်ဝမြို့အပိုင် ဇီးပင်ချောင်းအုပ်စုပိုင်နက်တစ်နေရာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုလည်းအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာများ၏ခေါင်းပေါ်ပုံကျရန်ယနေ့တိုင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပါသည်။ထိုကိစ္စဖြစ်စဉ်ဂဃနဏကို၂၅ရက်နေ့ပါ http://burmese.rohingyablogger.com/2017/06/blog-post_25.html?m=1 Sတွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှူနိုင်ပေသည်။ သူတို့အချင်းချင်း လိပ်ရှာ၊ဖားရှာ၊ခရုရှာရာတွင်မသင့်မတင့်ပြီးဖြစ်ပျင်နေတတ်သောဖြစ်စဉ်များကိုရိုဟင်ဂျာများခေါင်းပေါ်ပုံကျရန် ဘုန်းကြီးများနှင့်ရခိုင်များက BGPများကိုအသုံးချကာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့လီဆယ်ပြီးသတင်းမှားတင်ပေးကာရိုဟင်ဂျာများအားမတရားနှိပ်စက်ရန် အကွက်ကောင်းယူနေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။
AT Burmese စစ်တပ်၏အဓမ္မပြုကျင့်မှုစုံစမ်းရေးကော်မတီရဲ့နောက်ကွယ်ကသတင်းရင်းမြစ်
July 28, 2017	Leaveacomment 487 Views
၂၀၁၆ ခု အောက်တိုဘာ နောက်ပိုင်းမှစ၍ မြန်မာ့စစ်တပ်မှ မောင်တောမြို့မြောက်ပိုင်းတခွင်ကိုစစ်ဆင်ရေးပုံစံဖြင့် နယ်မြေရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်လှလှလေးကင်ပွန်းတပ်ကာနည်းမျိုးစုံသုံး၍ရိုဟင်ဂျာများကို နှိပ်စက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်မြန်မာစစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး ပျို၊အို မြောက်မြားစွာကို အုပ်စုဖွဲ့ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုအားလက်နက်သဖွယ်အသုံးချခဲ့ပေသည်။ယင်းသို့ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများအပြင် နေအိမ်များကိုလောင်ချာသုံး၍မီးလောင်စေခဲ့ခြင်း၊လူသားများကို သနားညှာတာမှုကင်းမဲ့စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့သဖြင့်ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအပေါင်းကသော်လည်းကောင်း၊ကမ္ဘာ့မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းကသော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာအစိုးရကိုရှုတ်ချခဲ့ပါသည်။ သတင်းမီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းကိုအခင်းဖြစ်နေရာများသို့လေ့လာနိုင်ရေးဝင်ခွင့်ပေးရန်မြန်မာအစိုးရကိုကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်းမြန်မာအစိုးရကလစ်လျူရှူထားခဲ့ပေသည်။ နောက်ဆုံး ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ တွင် CNN, REUTERS,ABC အပါအဝင်အခြားသော မီဒီယာသမားအချို့ကိုမြန်မာပြည်သို့ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်းအခင်းဖြစ်နေရာအားလုံးစုံသို့သွားရောက်ခြင်းမပြုဘဲ၊သွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်နေရာများတွင်လည်းလုံခြုံရေးထူထပ်စွာချထားခြင်းဖြင့် သတင်းလွတ်လပ်မှုကိုကန့်သတ်ထားခဲ့ပေသည်။ သတင်းသမားများပြန်သွားပြီးနောက် သတင်းသမားများနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့သူများကိုနှိပ်စက်ငွေညှစ်ခဲ့ပါသေးသည်။ စစ်တပ်၏အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူအချို့မှာ ၁။ဟာဆီနာဘေဂေါမ် ဘ နိုရ်အီဆလာမ် ၂၀နှစ် ၂။ အာရ်ဖာ ဘ ရှောမ်ရှူအာလာမ် ၂၀နှစ် ၃။ ယာစ်မိန် ဘ ဇာဟိတ်ဟူဆိန်း ၁၇နှစ် ၄။ လိုက်လာဘေဂေါမ် ဘ ဇာဟိတ်ဟူဆိန်း ၂၅နှစ် တို့ဖြစ်ကြပြီး ၄င်းသူတို့သည် ကျားခေါင်တောင်ကျေးရွာ၊မောင်တောမြောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပါသည်။ထိုသူတို့သည် အထက်ဖော်ပြသတင်းဌာနများသို့ မှန်မှန်ကန်ကန် အင်တာဗျူးပေးခဲ့ကြောင်း AT ...
AT Burmese တူရိန်းရွာမှ ၉၆၉ လူဆိုးဂိုဏ်း၏သောင်းကျန်းမှု
July 28, 2017	Leaveacomment 637 Views
မောင်တော၊စံကားပင်ရင်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့်မြို့မိချောင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိရိုဟင်ဂျာမိဘပြည်သူများပိုင်လယ်ယာမြေအများစုမှာ တူရိန်း ရခိုင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်တည်ရှိကာ ကျွဲ၊နွား စားကျက်မြေများမှာလည်းထိုရွာအနီးတဝိုက်တွင်တည်ရှိပေသည်။ ယခုနှစ်တွင် ၉၆၉ဂိုဏ်း၏ပယောဂကြောင့် တူရိန်းရခိုင်ရွာသားများသည်ဒေသခံရိုဟင်ဂျာများမှလယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုနိုင်အောင်နည်းမျိုးစုံဖြင့်ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခဲ့သဖြင့်လယ်ယာမြေအားလုံးနီးပါးပလှပ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုသို့လယ်မြေဧကပေါင်း ထောင်ချီ ပလှပ်စေခြင်းဖြင့်ရိုဟင်ဂျာများကိုဝမ်းစာခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုမရောင့်ရဲနိုင်သော ၉၆၉ဂိုဏ်းဝင် တူရိန်းရခိုင်ရွာသားများက ရိုဟင်ဂျာများပိုင်ကျွဲ၊နွားများကို မတရားဖမ်းဆီးသတ်စားခြင်း၊ကျွဲ၊နွားများကိုချုပ်နှောင်ခြင်းဖြင့်ငွေညှစ်ခြင်းများပြုလုပ်လာကြပါသည်။ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်းတွင် မြို့မိချောင်းကျေးရွာသား အီဒီရိစ် ဘ ဇိုက်နာလောဒိန် ပိုင်ကျွဲများကို ကိုယ်ပိုင်စားကျက်တွင်ကျောင်းနေရာမှ ၉၆၉ဂိုဏ်းဝင်ရခိုင်ရွာသားများဖြစ်ကြသော ၁။ အေးမောင် ဘ ဦးမောင်ရီခိုင်၊ ၂။ သန်းထွန်းမောင် ဘ ဦးထွန်းဖြူ နှင့် အခြားအမည်မသိတစ်ဦးတို့ကတုတ်၊ဓါးများဖြင့်လာရောက်၍ပိုင်ရှင်အားရိုက်နှက်ကာကျွဲများကို မတရားချုပ်နှောင်ဖမ်းချုပ်ထားပြီး ငွေ ၃သောင်းကျပ်ညှစ်ယူခဲ့ပါကြောင်း၊ စံကားပင်ရင်းကျေးရွာသား မလဝီဆော်လီမူလာ ဘ ဆွေတာမောတ် ပိုင်ဆိုင်သော ကျွဲများကို ထိုရခိုင်ရွာသားများက ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၇ နေ့တွင် အလားတူ ချုပ်နှောင်ထားကာငွေညှစ်ပြီးလွတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
Raped victims inquired by Investigation Committee (IC)
July 28, 2017	Leaveacomment 634 Views
28 July 2017 AT Correspondent, Maungdaw A five member Investigation Committee (IC) formed with Myanmar local authorities from Maungdaw Township came to Kya Gong Taung (Rabailla) and inquired four Rohingya raped victims at the village school today, 28 July 2017. The Investigation Committee consists of Maungdaw Township Administrator, Police SP, nurse team leader of Maungdaw General Hospital and two other ...